Ihe isi ike Trump gosipụtara China bụ mbido ọdịda dollar na ndakpọ akụ na ụba? : Martin Vrijland
Ihe isi ike Trump gosipụtara China bụ mbido ọdịda dollar na ndakpọ akụ na ụba?
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 18 Ka 2020	• 12 Comments
isi mmalite: abril.com.br
Site na ntọhapụ na-aga n'ihu nke ọkọlọtọ ọla edo na ọkọlọtọ mmanụ, dollar ahụ ghọrọ ego a ga-ebipụta na-enweghị oke. Anyị na-akpọ ya ego Fiat. Ego Fiat dị njọ maka azụmaahịa mba ofesi. E kwuwerị, ibipụta ọtụtụ narị ijeri na-akpata mbelata ego.
N'ihi na ụlọ akụ etiti etiti US (nri) na-achịkwa usoro a na -emepụta dollar na dollar ahụ bụ ọkọlọtọ na azụmaahịa mba ụwa, mbelata dollar a na-enwekwa mmetụta na ịrịda ego ndị ọzọ, gụnyere euro.
Site na ọnụahịa mmanụ gbọmgbọm na - adịghị mma (nke pụtara na ị nwetara ego ịzụta mmanụ) n'izu ndị na - adịbeghị anya, ọ bụ ihe dị mma na mmanụ abụghịzi ọkọlọtọ. A ga-eji Bill Gates dochie egwuri egwu ọhụụ dochie mmanụ (ìhè anyanwụ mee hydrogen maka ugbo eji ere oku.
Naanị ihe ga-enyere anyị aka na nke enweghị ihe mkpuchi ga-ekpuchi bụ nchịkwa ndị agha US (ruo ugbu a). NATO amanyela obodo ma ọ bụ onye ndu ọ bụla ịtụpụ dollar. O tinyela aka na bọmbụ na bọmbụ ma kpochapụ onye isi.
Yugoslavia 90s. Siri ike ike ụgwọ ọ bụla (ya mere dollar onwe ha). Ndi agha siri ike (obughi onye otu NATO ma o dighi. 4 n’okwu ike nke ndi agha n’uwa). Mgbe Tito nwụsịrị, ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ malitere ịlụ ọgụ megide ibe ha ịmalite agha nke kwesiri ibibi obodo ahụ, na-ahapụ IMF ịbanye ma gbaziri ego maka iwughachi (ịdabere dollar).
Iraq, Saddam Hussein chọrọ ire mmanụ mmanụ na euro. Mechaa.
Libya, Moammar Mohammed al-Qadhafi chọrọ ka onye nri Africa na-akwado ọla edo iji tọhapụ dabere na dollar. Ọ dị ọcha ma dịkwa mma n'anya.
Ugbu a agha nke Syria gosipụtara na ikike NATO (ihe egwuregwu ụmụaka America) abụghịzi ihe kachasị, yabụ bụ mmalite nke njedebe nke ụkpụrụ dollar zuru ụwa ọnụ. Imirikiti mba na-atụgharị na US, naanị azịza Donald Trump bụ akara siri ike: agha azụmahịa. Ugbu a - na ọnọdụ coronavirus - ọ daa azụ na-aga n'ihu na-agbadata China. N'ajụjụ ọnụ ikpeazụ ya na FOX News o kwuru ọbụlagodi na ọ chọrọ ịchụpụ mmekọrịta niile na China.
Maka ndekọ ahụ, ọ bara uru ịmara na gọọmentị China jisiri ike idobe akụ na ụba ya karịa ma ọ bụ na-erughị dollar onwe ha. A na-eji dollar ahụ maka azụmaahịa mba ụwa, mana ụlọ akụ etiti China na-azụta dollar kwa mgbe site na ọtụtụ obodo wee nwee ike idowe yuan China ike n'ime oke ya.
Na mgbakwunye, China nwere mmetụta akụ na ụba buru ibu n'ọtụtụ mba gburugburu ụwa na oru ngo nke Belt na Road Initiative (BRI) na-ahụ na mmekọrịta mba na otu narị na iri abụọ na 120 buru ibu. Nke ahụ na-eme ka mba na ụlọ ọrụ ndị ahụ dabere na China.
Mgbe Donald Trump tiri mkpu na ọ chọrọ iwepu China kpamkpam, ọ dị oke egwu dị ka omume ọhụrụ nke enweghị atụ banyere ikike na-enweghị ike. Ọ bụ ezie na Trump na-eme ka iwe ya nwere na njikọta China na nje corona, ezigbo ihe kpatara iwe ya nwere ike ịbụ na dollar ahụ ga-atụfu ụkpụrụ ahia ụwa ya na yuan China na-enweta ala.
China webatara otu n'ime ókèala ya ego cyber ọhụrụ ego ugwo: e-RMB (Ren Min Bi, nke putara 'ego ndi mmadu'). A na-anwale e-RMB ugbu a n'ọtụtụ obodo dị na China, gụnyere Shenzhen, Suzhou, Chengdu na Xiong'an. N’obodo ndị a, a na-anabatakarị e-RMB n’ụwa niile maka ịkwụ ụgwọ ụgwọ ọrụ, ụgbọ njem ọha, nri, na ịzụta n’ọtụtụ ụlọ ahịa. Ejikọtara sistemụ ahụ na WeChat na AliPay (sitere na Alibaba). Ego ọhụrụ nke cryptocurrency kpuchie nke Chinese Central Bank.
IMF guzobere ụkpụrụ nke ikike ikike pụrụ iche na 2016, nke "ego ndị ochie" dị adị na-etolite ụdị nkwado maka ọkọlọtọ SDRrency ọhụrụ a. Nsogbu dị na ntinye IMF a, agbanyeghị bụ na dollar ahụ na-etolite 41,73% na-ekere òkè na ọkwa ọhụrụ cryptocurrency a, ebe ndị China China nwere naanị 10.92% (Japanese yen 8.33%, British pound 8.09%, euro 30.93%). Yabụ na ka akụ na ụba China na-achọ ịbụ akụ na ụba kachasị ike n'ụwa, òkè nke IMF crypto ọkọlọtọ (SDR) dị obere.
Yabụ enwere agha agha na-aga; agha nke metụtara ịhazi usoro ego ọhụụ. Dollar ahụ yiri ka ọ na-efunahụ ya na nsogbu corona nyere nkwanye ikpeazụ, ebe ọ bụ na igwe ego anaghị agba ọsọ ngwa ngwa. Ugbu a nke bụ ilu, maka na ego adịghị ebi ọzọ. Naanị ọnụọgụ dị na kọmpụta na-abawanye.
Yuan China na-agbasi ike, ebe dollar na-adawanye uru.
Ajụjụ dị ugbu a bụ ma ọtụtụ mmadụ na ụlọ akụ na-achọ isi na dollar dollar kwaga ọkọlọtọ yuan ka ọ ga-abụrịrị ụdị nke ọkwa mba ọzọ ọzọ. SDR dị ka ọkọlọtọ crypto adịghị ka nhọrọ a pụrụ ịdabere na ya ma ọ bụ, n'ihi na mbenata dollar ahụ, SDR na-adakwa na ya (n'ihi dollar dollar nke 41,73% na SDR ahụ). Yabụ ịkwesịrị iwepụ mmetụta nke fiat ego (ego a na-edeghị ede) dịka ntọala nke sistemụ ego mba ofesi.
Dollar ahụ dị ka ọ rurula oge njedebe ya. A ga - akụ akụ na ụba na US na Europe na ọnwa ndị na - abịanụ site na nsonaazụ nke nsogbu corona. Ahịa ahịa na-ere ahịa arịgoro elu. Ọtụtụ ụlọ ọrụ ga-adaba na n'ihi na e bipụtala ọtụtụ narị ijeri, mwepu ego a ga-abụrịrị ihe onye ọ bụla ga-ahụ n'ọnwa na-abịa. Ndị ka nwere ụfọdụ ego ga-amalite ichegbu onwe ha.
N'ezie, ọnọdụ mbibi na-echere ọtụtụ ụlọ ọrụ na ndị nchekwa. Site na ọdịda nke dollar, ọla edo dị ka naanị ebe nchekwa dị mma, n'ihi na a na-ejikarị ego ọla edo n'ụwa iji kpuchie ego n'oge nrụpụta ego.
Agbanyeghị, bitcoin yikwara na ọ na-eweta ogige ahụ dị mma. N'inwe nsogbu nke ụlọ akụ na-ada ada (n'ihi na ụlọ ọrụ akụ na ndị mmadụ n'otu n'otu enweghị ike ịkwụ ụgwọ mgbazinye ego ha ma ọ bụ mmasị na mgbazinye ego ndị ahụ), ihe iyi egwu nke ịgbapụta ego na mgbapụta na-abata. Nke a pụtara na steeti echekwara ụlọ akụ (gụọ: onye na-atụ ụtụ) ma ọ bụ na ejiri ego chekwaa ụlọ akụ.
Ya mere, anyi nwere ike ihu njem di ike nke ego rue bitcoin na ọla edo n’abia.
O buru amụma na ụgbọ elu gaa bitcoin ga-abụ nke kachasị ukwuu, n'ihi na ị naghị azụta ọla edo site na iji bọtịnụ bọtịnụ. Opened mepeela obere akpa bitcoin n’oge ma ihe dị n’ụlọ akụ gị taa ga-adị na akpa bitcoin gị echi. Flightgbọ elu ahụ gaa bitcoin, gbakwunyere ụkpụrụ njigide ya na-adabere na ya, ọ nwere ike inye bitcoin ọkwá siri ike zuru ụwa ọnụ nke na o nwere ike iwere ọnọdụ dollar ahụ.
Enwere ike kpuchie yuan nke China site na nnukwu akụ nke China, mana ihe kpatara ọla edo ka bụrụ ebe nchekwa n'ụwa dum zoro ezo n'eziokwu na ị ga-etinye ọla edo m. Ga-enweta nke ahụ n’ala site na ọrụ igwupụta ihe n’ebe a na-egwu ọla, nke a bụ usoro dị oke ọnụ ma na-agba mbọ ma enwere ụkọ. Minkpụrụ Ngwuputa Bitcoin dabere na otu echiche ahụ, dị ka akọwara na isiokwu a.
Olu nke bitcoin ahia zuru ụwa ugbu a dị ukwuu nke na ọtụtụ ndị ọzọ na ọtụtụ ndị na-etinye ego na ndị nwere nnukwu ego nwere mmasị na ya ma na-abanye ya. Ọ bụrụ na ịgbakwunye eziokwu ahụ na mbelata ego na iwelata dollar, ọ dị ka ọtụtụ maka bitcoin ga-abụ ebe nchekwa bọmbụ. Ya mere o nwere ikike ịtọ ọkwa mba ụwa ọhụrụ ma ọ bụrụ na dollar ada, bitcoin nwere ike were ọnọdụ dollar ahụ na ọkwa SDR cryptocurrency IMF.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: mbipụta.cnn.com, ft.com, globalresearch.ca
Ọ bụ ezie na ụda na-eduzi agha agha ya, ndị Yuan China na-ewere ọnọdụ dollar ahụ karia
Akụkọ ihe mere eme na-egosi okirikiri afọ iri itoolu na ihe ngosipụta niile na-egosi nlaazu miri emi nke a na-apụghị izere ezere
Nchịkwa Corona, obere mkpụmkpụ maka mkpochapụ ego na mmetụta akụ na ụba n'ụwa niile
Venezuela bụ ihe atụ nke ihe na-eche anyị na Europe na iwebata cryptocurrency dị ka ụkpụrụ ụwa
Dị ka ụda na-agbanye mmanụ na ọkụ na North Korea, Jerusalem na Venezuela, ike na-agbanwe n'akụkụ ọwụwa anyanwụ
Tags: na, belt, bitcoin, bri, china, Chinese, coronavirus, nsogbu, dollar, e-RMB, agba, ego mbata, ụzọ, n'okporo ụzọ, SDR, trump, Val, yuan
N'uche m, anyị ga-ebu ụzọ hụ nkewa nke dollar n'etiti dollar (mba) na mba ofesi na USA n'onwe ya. Nke ikpeazu ga-emebi oke, dịka ihe nlere dị ka Venezuela. Ikewa nke dollar ahụ bụ akụkụ nke nrụghari ego, ebe obodo ọ bụla etinyela ọtụtụ ego nke ụmụ amaala (na mpaghara ego, dịka Iniase rupees) na nchekwa US na usoro nkwụnye ego ụlọ akụ iji kwado azụmahịa mba ụwa nke e doziri na USD. Mba nile agagh acho ihu ihu ihe ha kwuru nke USA z = kpopu mmiri n'ihi hyperinflation, ya mere, echiche nke nkewa. Ọzọkwa, China nwere ihe karịrị otu puku ijeri US nchekwa ego. Ọ bụrụ na China chọrọ imehie ihe ha nwere ike tụfuo ụgwọ ahụ n’ahịa ma ọ bụrụ na -achọghị ihe ọ bụla, ndị FED ga-azụrịrị ụgwọ a nke ga-ebute hyperinflation na USA. Trump siri ike banyere agha tariffs mere ya ọ dị m ka m bụụrụ ndị mmadụ aka irube ego. Echefula na nrụpụta ego pụtara na a ga-ewepụ ụgwọ dị ukwuu, n'ihi na ị na-edozigharị enweghị isi na itinye ụgwọ ọjọọ sitere na usoro ịgbazinye ego na sistemụ ọhụrụ ahụ. Biko mara, nke a ga-emetụta naanị ndị a họpụtara ahọta ọ bụghị na nnyefe ma ọ bụ ndị nwere ụgwọ nkeonwe, a ga-aga-aga n'ihu na usoro ọhụrụ. Ekwere m na anyị ga-ahụ nnukwu nnuku ekele nke mba ụwa tupu ọ pụọ n'anya ya. Mmụba a bụ kariri n'ihi ịchọrọ dollar iji dozie usoro niile a siri ike. Echere m na nke a ga-abụ oge ndị egwuregwu (ụlọ akụ na ụlọ akụ etiti) ga-ere ụgwọ ha ji America.
Hydrogen bụ ume mgbanwe nke na-abịa ma ọ ga -eme mgbanwe paradigm. Nanị ihe ọ bụla metụtara mmetụta akụ na ụba, ihe niile ụdị dabere na isi mmalite ike nwere ike ịhapụ windo.
Agha nnọchiteanya nke China na America amalitelarị na ọ ga-akawanye njọ n'ihi ọnwụ nke onye nnọchi anya China na Israel na ebubo mkpesa na-akpata ọrịa. Ekwesịrị ileba anya na-ewulite ndị agha na Oké Osimiri South China (Diego Garcia).
Hong Kong bụ ọrụ CIA Otpor zuru oke ma n'ezie China ga-azaghachi n'ụzọ ya mgbe oge ziri ezi.
@salmon, ogabu oge.
ọbụlagodi mmachi, TSMC bụ ụlọ ọrụ Taiwanese nwere mmerụ ahụ na China.
World Chipmaker Onye Kwekọrịtara Kachasị Ihe Nkwekọrịta Na-egbochi Mfefe Nye Huawei Ka ọ bụrụ ntinye ntinye ọhụụ nke United States
Onye ode akwụkwọ mgbasa ozi na Israel dị na 4 chan kwuru Shin Bet, Israel 'Mossad', gbuchara onye nnọchi anya arịrịọ China mgbe Du Wei gbalịsịrị imebi ma kesaa ozi banyere labs ndị agha China, wee buru ụzọ abụọ.
lee ihe onyonyo si n’elu ZIO enwere ihe di egwu maka ndi a na-enyo enyo na mbu.
nke ọma, onye a na-enyo enyo na mbụ Bannon na-atụ anya na ọgụ na-abịa abịa na China.
Bannon WarRoom - Citizensmụ amaala nke American Republic
Ndenye aha 66,6K
Bannon abụghị onye PR (Goebbels) nke Trump, ha na-akpọkwa egwu ọzọ dịka ụkpụrụ Hegelian si dị.
Ọ na-amalite ile anya karia ka atụmatụ dị ebe esigharịrị usoro ahụ. Ihe m na-ekwu n’ebe a bụ na akụkụ akụ na ụba na-egbu SME na ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ, n’ihi na ha agakwaghị adị mkpa, ọ bụkwa mgbe ha nwere ike iwetulata ihe ndị ha chọrọ, dịka ọmụmaatụ, ịgba ọgwụ mgbochi. Nọmalị, ọnụ ọgụgụ mmadụ ga-ebu ụzọ na-eto ma nwekwuo ndị na-enye ya, ma ọ bụ na ọnụọgụgụ ga-ebelata na ọnụ ọgụgụ ndị na-eweta ya ga-ebelata. Ugbu a nke a yiri ka ọ ga-atụgharị.
" Dọọ ọchịchị onye kwuo uche ya ụzọ mkpirisi site na mkpọchi na iweghachite akụ na ụba
Gaghị enwe ike ịbanye na ụlọ ahịa ahụ ma ọ bụrụ na inyeghị aha gị na nọmba ohu na tebụl na nke ahụ bụ naanị mmalite »
Nleta ha: 2.515.388
Marcos op Corona Nsogbu Covid-19 bụ ihe echetara afọ 2003 MS Blaster virus nke ana - akpọ Bill Gates